(tonga teto avy amin'ny Didy folo)
Ny Didy Folo dia fitambaran-tsoratra mirakitra toromarika momba ny fitondran-tena sy ny fivavahana izay hita ao amin' ny Baiboly sady voalaza ao fa nosoratan' ny "tanan' Andriamanitra" tamin' ny vato fisaka sy nomeny an' i Mosesy (na Môizy) tao amin' ny tendrombohitra Sinay (na Horeba). Amin' ny teny hebreo dia atao hoe עֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת / ʿAsereth ha-Diberoth izay midika hoe "teny folo" ny Didy Folo, ary amin' ny teny grika dia δεκάλογος / dekálogos izay midika hoe "teny folo" ihany koa (Jereo: Eksôdôsy 34:28; Deoterônômy 4:13).
1 Lahatsoratra ao amin' ny Baiboly
1.1 Ny Didy Folo ao amin' ny Bokin' ny Eksodosy
1.2 Ny Didy Folo ao amin' ny Bokin' ny Deoteronomia
2 Ny Didy Folo ao amin' ny Baiboly Samaritana
Lahatsoratra ao amin' ny BaibolyModifier
Boky roa no ahitana ny Didy Folo ao amin' ny Baiboly dia ny Eksodosy (na Eksaody) sy ny Deoteronomia (na Deoterônômy). Hitantsika etsy ambany ny lahatsoratra nalaina tao amin' ny Baiboly protestanta amin' ny teny malagasy.
Ny Didy Folo ao amin' ny Bokin' ny EksodosyModifier
2 Izaho no Jehovah Andriamanitrao, Izay nitondra anao nivoaka avy tany amin' ny tany Egypta, tamin' ny trano nahandevozana. 3 Aza manana andriamani-kafa, fa Izaho ihany. 4 Aza manao sarin-javatra voasokitra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin' ny lanitra ambony, na izay etỳ amin' ny tany ambany, na izay any amin' ny rano ambanin' ny tany. 5 Aza miankohoka eo anatrehany, ary aza manompo azy; fa Izaho, Jehovah Andriamanitrao, dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin' ny zanaka hatramin' ny zafiafy sy ny zafindohalika, dia amin'izay mankahala Ahy;6 nefa kosa mamindra fo amin' ny olona arivo mandimby izay tia Ahy ka mitandrina ny didiko.
8 Mahatsiarova ny andro Sabata hanamasi­na azy. 9 Henemana no hiasanao sy hanaovanao ny raharahanao rehetra. 10 Fa Sabatan' i Jehovah Andriamanitrao ny andro fahafito; koa aza manao raharaha akory ianao amin' izany, na ny zanakao-lahy, na ny zanakao-vavy, na ny ankizilahinao, na ny ankizivavinao na ny biby fiompinao, na ny vahininao izay tafiditra eo am-bavahadinao. 11 Fa henemana no nanaovan' i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mbamin' izay rehetra ao aminy, dia nitsahatra Izy tamin' ny andro fahafito; izany no nitahian' i Jehovah ny andro Sabata sy nanamasinany azy.
12 Manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin' ny tany izay omen' i Jehovah Andriamanitrao ho anao.
17 Aza mitsiriritra ny tranon' ny namanao; aza mitsiriritra ny vadin' ny namanao, na ny ankizilahiny, na ny ankizivaviny, na ny ombiny, na ny borikiny, na izay mety ho an' ny namanao akory aza..
Ny Didy Folo ao amin' ny Bokin' ny DeoteronomiaModifier
6 Izaho no Jehovah Andriamanitrao, Izay nitondra anao nivoaka avy tany amin' ny tany Egypta, tamin' ny trano nahandevozana. 7 Aza manana andriamani-kafa, fa Izaho ihany. 8 Aza manao sarin-javatra voasokitra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra any amin' ny lanitra ambony, na izay etỳ amin' ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin' ny tany. 9 Aza miankohoka eo anatrehany, ary aza manompo azy; fa Izaho, Jehovah Andriamanitrao, dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin' ny zanaka hatramin' ny zafiafy sy ny zafindohalika, dia amin' izay mankahala Ahy, 10 nefa kosa mamindra fo amin' ny olona arivo mandimby, izay tia Ahy ka mitandrina ny didiko.
11 Aza manonona foana ny anaran' i Jehovah Andriamanitrao; fa tsy hataon' i Jehovah ho tsy manan-tsiny izay manonona foana ny anarany.
12 Mitandrema ny andro Sabata hanamasima azy, araka izay nandidian' i Jehovah Andriamanitrao anao. 13 Henemana no hiasanao sy hanaovanao ny raharahanao rehetra. 14 Fa Sabatan' i Jehovah Andriamanitrao ny andro fahafito; koa aza manao raharaha akory ianao amin' izany, na ny zanakao-lahy, na ny zanakao-vavy, na ny ankizilahinao, na ny ankizivavinao, na ny ombinao, na ny borikinao, na ny biby fiompinao rehetra, na ny vahininao izay tafiditra eo am-bavahadinao; mba hitsaharan' ny ankizilahinao sy ny ankizivavinao tahaka anao koa. 15 Ary tsarovy fa andevo tany amin' ny tany Egypta ianao, ka tanana mahery sy sandry nahinjitra no nitondran' i Jehovah Andriamanitrao anao nivoaka avy tany; izany no nandidian' i Jehovah Andriamanitrao anao hitandrina ny andro Sabata.
16 Manajà ny rainao sy ny reninao, araka izay nandidian' i Jehovah Andriamanitrao anao, mba ho maro andro ianao, ary mba hahita soa any amin' ny tany izay omen' i Jehovah Andriamanitrao ho anao.
18 Ary aza mitsiriritra ny vadin' ny namanao; ary aza mitsiriritra ny tranon' ny namanao, na ny taniny, na ny ankizilahiny, na ny ankizivaviny, na ny ombiny, na ny borikiny, na izay mety ho an' ny namanao akory aza.
Misy fahasamihafana ny lahatsoratra roa avy ao amin'ny Baiboly. Isan' ny misongadina ny mikasika ny Sabata. Ampiasaina ny teny hoe Mahatsiarova (hebreo: zakhor) ao amin' ny Eksodosy, ary Mitandrema (hebreo: chamor) kosa raha ao amin' ny Deteronomia. Toy izany koa ny didy farany mikasika ny Fitsiriritana.
Ny Didy Folo ao amin' ny Baiboly SamaritanaModifier
Ny Baiboly samaritana, izay tsy ahitana afa-tsy ny Torah (izany hoe ny Pentateoka), dia nanampy ao amin' ny didy fahafolo ny tokony hanajana ny Tendrombohitra Garizima izay foiben' ny fanompoam-pivavahana samaritana. Ireo endrika roa isehoan' ny Didy Folo ao amin' ny Baiboly hebreo ireo dia narindra mba hitovy tanteraka ao amin' ny Baiboly samaritana.
Mba hitazomany ny isan'ireo didy ireo ho folo dia heverin' ny Samaritana ho fampahafantarana mialoha fotsiny ilay ataon' ny Jiosy hoe "didy voalohany" (“Izaho no IHVH Andriamanitrao, izay nitondra anao avy any amin’ ny tanin’i Ejipta, niala tamin’ny tranon’ny fanandevozana"), ka ny didy voalohany ao amin’ ny Torah samaritana dia ny didy faharoa ao amin'ny Torah jiosy. Amin' ny Samaritana, "ny olon-kendry jiosy dia namadika io fampahafantarana io ho didy mba haha folo ny isan' ny didy raha nanitsy ny Toràny izy ireo tamin’ ny nanesorany ny didy fahafolo"  izay mikasika ny tendrombohitra Gerizima. Ny isan' ny didy dia voalaza ao amin' ny Bokin' ny Eksodosy (Eks. 34.28).
Araka ny lahatsoratra avy ao amin' ny Eksodosy, dia mihoatra ny folo ny fitambaran' ireo fehezanteny misy ny teny hoe "Aza" sy ny matoanteny amin'ny filaza mandidy toy ny hoe mitandrema. Araka ny Baiboly anefa dia folo ihany ny Didy. Noho izany dia samy manana ny fomba amaritany ny didy tsirairay ny fiangonana isanisany. Hita etsy ambany ny ohatra maneho ny fahasamihafana misy.
Lalàna fiton' i Nôa (na Nôe)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Didy_Folo&oldid=1039166"
Dernière modification le 21 Oktobra 2021, à 07:34
Voaova farany tamin'ny 21 Oktobra 2021 amin'ny 07:34 ity pejy ity.